Hiikaa hirmaannaan abbootii Gadaa sirna siyaasaa biyyattii keessatti qabaatu - BBC News Afaan Oromoo
Shorrii abbootiiin gadaa siyaasa biyyattii keessatti qabaatan olaanaa ta'unsaa seenaa sirna gadaa Oromoo irraa hubatamuun akka danda'amu dura taa'aan gumii abbootii gadaa Oromoo BBC'tti himaniiru.
Erga yeroo dhiiyootiin asi abbootiin gadaa waltajjiiwwan marii garaa garaa irratti argamuun kan gaheesaanii akka kumaachaniif affeeramaa jiru. Mariin tibbana abbootii Gadaa Oromoo Mministira mummichaa biyyattii Dr Abiyi Ahimad waliin taasisan agarsiistuudhaa laata jechuun BBC dura taa'aa gumii abbootii Gadaa Oromoofi abbaa Gadaa Tulamaa Obbo Bayanaa Sanbatoo dubbiseera.
Abaan Gadaa Obbo Bayyanaanis mariin isaanii waa'ee ummata Oromoo, nageenyaa, waa'ee guddinaafi misoomaa irratti fulleefachuun marii'atamuusaa dubbattu.
Keessattu nagaan warra kaan waliin jiraachu ilaalchisee Oromoon akkuma duriitti nageenyaa sabaafi sablamiilee naannicha keessatti argaman waliin haala jaalalaan waliin jiraatu irratti mari'achu dubbatu.
Oromoon aadaa guddifannaafi moggaasaan orma ofiitti fuudhee akka qomoo ofiitti waliin jiraachuu turuu eeranii, 'nuti nama hinjibinu. Oromoon taayitaa yoo qabate biyyaa nu baasa isa jettan dhiisaa jechuu mar'anne' jedhaniiru.
Irra caalaa gaheen abbootii gadaa gama nageenya, tasgabbii fi guddiinaa keessatti bakka olaan qabaachu haala agarsiisuun artiiftootaafi qaamoolee biraa waliin mari'achuu himu.
Oromoon osoo kan faranjii hinfudhatiin duraa kaasee sirna dimokraasii keessa waan tureef kan jedhan Abbaa gadaa Bayanaan amma motummaan bakka nuuf kennuunsaa nageenyiifi sagabbiin caalaa akka cimuuf gahee olaan qabaachu himu.
Akka bulchiinsoota duraan sanatti gadaan oromoo gara cinaatti kan dhiibamu yoo ta'e namni lamaayyu wlaitti qabamu hindanda'u, jedhaniiru.
Gadaan haala amma eegalameen yoo kallattii hundaan eddoon keennameefi dimokraasiin dhugaafi kabajni mirga namoomaa yeroo gabaabaa keessatti akka dhufuu danad'ulleen abdiisaan himaniiru.
Namoonni walii dhagahuun deemnaan biyyi tun safuu dhugaa hubachuun biyyoota awurooppaa guddataniiru jedhamaniitti guddinni olaanaa ni dhufas jedhaniiru.